Transcend ChitoroJet 200 Ongororo: Kutakurika uye Kumhanyisa kweMac yako | Ndinobva mac
Transcend ChitoroJet 200 ongororo: kutakurika uye kumhanyisa kweMac yako
Iko kusanganisa kweSSD disks muApple laptops kwaive kukosha kwakakosha kwehunhu, kwete chete yekugona kudzikisa kukora kwayo uye huremu, asiwo nekumhanyisa kwemidziyo, yakakwira zvakanyanya nekuda kwekukwirisa mwero werudzi urwu rwekuchengetedza.
Peso zvakare yakamirira kuwanda kwemutengo, kuchimanikidza mushandisi kufunga kuti ingani nzvimbo yekuchengetera yavanoda nekuti inobhadharwa pamutengo wegoridhe. Imwe nzira iyo vazhinji vedu tinoshandira kune ndeyekunze dhisiki, uye nhasi tinoongorora inonakidza sarudzo kubva kuTranscend, iyo diski ChitoroJet 200 iyo inotipa isu kutakurika kutakurika nekumhanyisa kumhanya ne2TB yekuchengetedza kugona.
1 Dhizaini uye Magadzirirwo
2 Transcend Elite Software
Dhizaini uye Magadzirirwo
Zvishoma zvinogona kutaurwa nezve dhizaini yakapusa asi inoyevedza seiyi Transcend's ChitoroJet 200. Izvo hazvigone kuve zvakafanira kuperekedza yedu MacBook kana MacBook Pro, ine yayo aruminiyamu mamiriro uye mashoma mashoma. LED chete inovhenekera painenge ichishanda uye chinongedzo cheUSB-C kune rimwe remativi chinopwanya ichi chidiki chesimbi idiki uye yakatetepa kupfuura chero ipi zvayo smartphone pamusika, uye yakareruka pane 133 gramu chete. Hwaro hweiyo inotakurika dhisiki rakagadzirwa nepurasitiki dema kuitira kuti isakanganisa iyo nzvimbo yaunoisa iyo.
Imwe bhenefiti yerudzi urwu rwe diski ndeyekuti ivo havadi chero emagetsi ekuwedzera kune izvo zvinopihwa nekombuta kwaunobatanidza. Iwe haufanire kuenda kunochaja neadapter yemagetsi. yako chete inotakurika dhisiki uye diki USB-C tambo iyo yainosanganisa. Tsananguro yemugadziri ndeyekuti inosanganisa USB-C kune USB-C tambo uye imwe USB-A kune USB-C kuitira kuti iwe ugone kuzvibatanidza kune chero komputa pamusika pasina kutenga mamwe tambo. Iwo tambo dzinoenderana neiyo USB-C 3.1 Gen 1 kududzirwa, saka ivo vanopa kumhanya kunosvika kusvika ku5Gbps.
Ngatisanyengedzwa nehukuru hweichi chidiki ChitoroJet 200 nekuti ine 2TB yekugona. Mukati maro mune 2,5-disk ine HFS + fomati uye kumhanyisa dhata yekumhanyisa, sekureva kwemugadziri, ye135MB / s zvese kuverenga nekunyora. Mune bvunzo dzatakaita, uye tichifunga kuti mhando iyi yekuyera inokurudzirwa zvakanyanya nemidziyo yaunoshandisa uye nesarudzo yakasarudzwa kuti izviite, kumhanya kwatakawana kuri padyo chaizvo nezvinotsanangurwa nemugadziri.
Iri diski rinotakurika rinoperekedzwa ne yemahara software yaunogona kugadzira backup makopi emafaira ako, dzoreredza iwo makopi, enzanisira mafolda uye kunyange kuteedzera zvemukati kubva kune gore rekuchengetedza sevhisi seDropbox kana Google Drive.
Kana iwe uchida kushandisa ino inotakurika diski kune backup kana kuyananisa mafaera, hauzove neimwe nzira iri nani kana inokurumidza pane kushandisa software inoperekedza. Yayo interface iri nyore uye mumatanho mashoma iwe unozokwanisa kuita aya mabasa pasina kuita kune yechitatu-bato software.
Iyi Transcend ChitoroJet 200 dhiraivha ndiyo yakanakisa imwe nzira yekuwedzera yako laptop nzvimbo yekuchengetera. Nediki diki uye rakareruka saizi iwe unogona kuenda nayo iwe chero kupi muhomwe muhomwe yako bhegi kana bhegi padhuze ne laptop yako. Kunyangwe paine saizi iyi, isu hatisi kurega simba, nekuti 2TB yayo yekuchengetedza ichave yakakwana kuti iwe uchengete chero rako rebasa, nekukurumidza kumhanyisa kumhanya tichifunga kuti isu takatarisana neyakajairwa 2,5 ″ disk. Iyo sarudzo yakanaka kune avo vanoshanda zvakanyanya palaptop yavo asi vanoda yakawanda yekuchengetera kubata mafaera mahombe, ayo avanoda zvakare kumhanyisa ekumhanyisa mhanyisa. Mutengo wayo € 130 paAmazon (link), iyo yakasimba kwazvo kana tikatarisa dhizaini yayo, mashandiro uye kugona kwayo.
Transcend ChitoroJet 200
Diki saizi uye mwenje
USB-C 3.1 Gen 1 ine inosvika 135MB / s kumhanya
Inosanganisira maviri USB-C uye USB-C kune USB-A tambo
Ndasuwa bhegi rekutakura
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Accessories » Transcend ChitoroJet 200 ongororo: kutakurika uye kumhanyisa kweMac yako
Iyo software yekugadzirisa Mac neT2 chip parizvino yakamira
Apple Bhadhara kuda kusvika muSaudi Arabia